शुक्रबार, २४ मंसिर, २०७३ मा प्रकाशित,
संविधान कार्यान्वयनको सकस देखिएका बेला कांग्रेस माओवादी केन्द्रले प्रदेश नम्बर पाँचको पहाडी जिल्लालाई मधेसबाट अलग्याउने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । यसको विरोधमा उक्त प्रदेशमा चर्को प्रदर्शन सुरु भएको छ । प्रदेशका नाममा जहीँतहीँ विरोध देखिएपछि धेरैले राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई सम्झिन थालेका छन् ।केसीले यो मलुकमा संघीयता असफल हुने दाबी गर्दै विरोध गरिरहेका छन् । प्रस्तुत छ- समसामयिक विषयमा चित्रबहादुर केसीसँग गरिएको छोटो कुराकानी :
प्रदेश सीमाङ्कनका नाममा प्रमुख दलहरुबीच देखिएको विवादलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
देश टुक्रयाउने खेल भईरहेको छ । यसमा पुष्पकमल दाहाल लागिपरेका छन् । यति सानो मुलुकमा संघीयता होइन, विकेन्द्रीकरण आवश्यक हो भन्ने मागलाई उनले कहिल्यै ध्यान दिएनन् । उनी भारतका प्रतिनिधिका रुपमा राजनीति गर्दैछन् । कांग्रेस, एमाले उनको पुच्छर समातेर हिडिरहेका छन् ।
अब संघीयताबाट पन्छिन सम्भव छ र ?
सम्भव/असम्भवको कुरा भएन । देशका लागि आवश्यक के हो, त्यता ध्यान दिनु पर्‍यो । देशै रहेन भने केको संघीयता ? देशको अवस्था नाइजेरिया, सुडान र इथियोपियाजस्तो हुँदैछ । संघीयताले देश टुक्रन्छ भन्ने हाम्रो दावी विस्तारै सत्य सावित हुँदै छ कि छैन ? अहिले संघीयताकै कारणले मुलुकमा द्वन्द्व देखिएको छ ।
यति ठूलो परिवर्तनका क्रममा विवाद देखिनु सामान्य होइन र ?
केलाई सामान्य भन्ने ? मुलुकले संघीयताका नामा धेरै लामो कष्ट बेहोरेको छ । अझै के–के हुने हो हेर्न बाँकी छ । विवादै नभएको प्रदेश नम्बर पाँचबाट पुष्पकमल दाहालले पहाडबाट मधेस अलग बनाउन प्रस्ताव अघि सारेका छन् । यो नै देश टुक्रयाउने पहिलो कसरत हो ।
संविधान संशोधनाट विवाद साम्य हुन्छ भनिदै छ नि त ?
विवाद के को ? कसको ? नेपालको संविधानका बारेमा भारतले विवाद निकाल्ने अनि संसदबाट उसले जे–जे भन्छ त्यही–त्यही मानेर संशोधन गर्दै जाने ? जब जनताले मान्नेवाला छैनन् । पुष्पकमल दाहालले आफ्नो सक्कली अनुहार बल्ल देखाएका छन् । उनले देश टुक्रयाउने काम सूरु गरिसकेका छन् ।
के संघीयता लागू हुँदैन त नेपालमा ?